अन्य जनावरहरू | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: अन्य जनावरहरू
खराबीहरू किन मर्छन्?
खरायो किन मर्दछन्? तिनीहरूले त्यस्तो खाना उठाए…। मलाई लाग्छ कोसिडीओसिस अधिक रसयुक्त फिडको पृष्ठभूमिमा हो। घाँस वा सुक्खा घाँसमा बिरूवा लगाउनुहोस्, कुनै पनि बन्दकोबी नदिनुहोस्, coccidiostatics खोज्नुहोस्। प्रश्नहरू हुनेछन्, व्यक्तिगतमा लेख्नुहोस्। ...
मलाई भन्नुहोस्, कुन प्रकारका जनावरहरू च्युबियाको रातो पुस्तकमा सूचीबद्ध छन्?
मलाई भन, कुन प्रकारका जनावरहरू छुवासियाको रेड बुकमा समावेश छन्? !!! यदि तपाईंलाई सबै जनावरहरू आवश्यक छ भने, तब यी चराहरू, र पशुहरू, र उभयचर, र सरीसृपहरू, र माछा, र सबै कुरा, हुन् ...
कर्डेसीप्स के हो?
Cordyceps के हो? के तपाइँ हामीलाई अन्तिम खेल थाहा छ? त्यसो भए, त्यहाँ फg्गलले मानिसहरूलाई परजीवी दिन्छ, तर जीवनमा यसले केवल कीराहरूलाई परजीवी दिन्छ र तिनीहरूलाई सूर्यमा क्रल गर्दछ, जसबाट ...
सोपर्रोट्रोफहरू के हुन्?
सप्रोट्रफ्स के हुन्? ग्रीकबाट सपरोस सडेको र ... ट्राफ), हेटेरोट्रोफिक जीवहरू पोषणको लागि जैविक खाना प्रयोग गर्दै। जनावरहरुको मृत शरीर वा मल विसर्जन (मल विसर्जन) को जडान। जैविकको खनिजकरणमा भाग लिदै। यौगिकहरु, एस गठन महत्वपूर्ण ...
एक prudovik को बारे मा केहि लेख्नुहोस् वा कम्तिमा एक वेबसाइट दिनुहोस् जसको बारेमा केहि लेखिएको छ
पोखरीको घोंघाको बारेमा केहि लेख्नुहोस्, वा कम्तिमा एउटा साइट दिनुहोस् जसमा उसको बारेमा केहि लेखिएको छ पोखरी घोंघे (lat.Lymnaeidae), फोक्सोको क्रमबाट प्वाँखहरूको परिवार (पुल्मोनटा)। ताजा पानीका बृहत्तर निवासीहरू ...
माराबाउ को हुनुहुन्छ?
माराबुउ सारस माराबुऊ 769 110;; (lat। ल्याप्टप्टिलस) सारस परिवारका चराहरूको जीनस, जसमा तीन प्रजातिहरू समावेश छन्। आकार मा माराबुउ चरा ११० देखि १ 150० सेमी, स्प्यान ... मा फरक हुन्छ।
रक्तचाप के हो?
रक्तवाहिनी भनेको के हो? रगत कीड़ेलाई गँड्यौलाको आकारको रूपमा चिनिन्छ। रातो लामखुट्टे लार्वा २ mm मिलीमीटरको लम्बाइमा पुग्छ। ऊ बिरुवा पोखरी, ताल र स्ट्रिमहरूसँग जथाभावी गाईवस्तुमा बस्छ, रमाजिंग गर्दै तिनीहरू आफैंमा फेला पार्दछन् ...
स्पोर्सले कसरी मोब्समा उजागर गर्छ, फेर्न?
कोख र फर्नमा बीजाणु कसरी अंकुरण हुन्छ? फर्नहरू बारहमासी जडिबुटी हुन्। तिनीहरू आर्द्र छायादार ठाउँमा हुर्कन्छन्, प्राय: ज forest्गलको छानामुनि र ओसिलो खोलाको छेउमा। फर्नहरूसँग मात्रै छैन ...
कुचुरलाई के गर्नु पर्छ? सेब र रोटी को अतिरिक्त केहि पनि खाँदैन।
थ्रसलाई के खान दिने? उसले स्याउ र रोटी बाहेक अरू केही खाँदैन। थ्रेशसले कीराहरू, माकुरो, गँडाहरू, मोलस्क, बेरीहरूमा फिड गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि यो उसको लागि पर्याप्त छ, त्यसैले उसले खाँदैन। मध्यम आकारको बर्डबर्ड्स थ्रेश्स, ...
नटलस को हो?
नटिलस को हो? त्यस्तै एउटा समूह थियो, अब यू-पीटर, यदि तपाईं कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने) नटिलस पोम्पालिउस, ach ० को दशकमा लोकप्रिय व्याचिस्लाभ बुटुसोभसँगको एउटा समूह, अब यस्तो देखिदैन।eगीतहरू लाग्यो ...
खाद्य शास्नीहरू के हुन्? तिनीहरूलाई कसरी जगायो?
खाने दालहरू के के हुन्? कसरी फ्राई गर्न? हो ती सबै खान योग्य देखिन्छन्। पेरिसमा तिनीहरू पार्कमा कोइलामा पकाइन्छन्। आगोबाट आलुको स्वाद एकदम खाद्यको सम्झना दिलाउँदछ - वास्तविक, ...
Mayflies। प्रतिनिधिहरू, के त्यहाँ पखेटा छन्?, के तिनीहरू सर्वसाधारण छन्?, कुन मुख उपकरण? र कुन विकास?
मेफ्लाइज प्रतिनिधिहरू, के त्यहाँ पखेटा हुन्छन्?, के तिनीहरू सर्वभाषी हुन्?, कस्तो प्रकारको मौखिक उपकरण?, र के विकास? नमस्ते, वयस्क मेफ्लाइजले सबै खाँदैन, तिनीहरूको मौखिक उपकरण कम छ। त्यहाँ पखेटा छन्, २ जोडी, जबकि दोस्रो ...
चिसो रगत पिउने के हो?
चिसो-रगत जनावरहरू के हुन्? सबै invertebrates, माछा, उभयचर र सरीसृप उनीहरूको शरीर टेम्पा-पाइन प्राय: १२ सेन्टिग्रेड बढी वा परिवेशको तापक्रम बराबर हुन्छ। तिनीहरु मध्य धेरै जसो ...
पतली लामो खुट्टा र एक सानो राउन्ड शरीरको साथ मकईहरूको नाम के हो?
पातलो लामो खुट्टा र सानो गोलो शरीर भएको माकुरोलाई के भनिन्छ? हाइमेकर्स वा (ल्याटिन ओपिलियन्स, = फलांगिडा) अर्रचनिडहरूको वर्गबाट ​​आर्थ्रोपडहरूको टुक्रा टुक्रा। २०० In मा, त्यहाँ y,2005०० भन्दा बढी प्रजाति हाईमेकरहरू थिए, ...
महामारी भनेको के हो? एक महामारी कस्तो छ?
महामारी के हो? महामारी के हो? एक महामारी जब आधा क्षेत्र संक्रमित हुन्छ। र एक महामारी तब हो जब सम्पूर्ण देश खतरनाक भाइरस वा संक्रमित महामारी बाट संक्रमित छ एक महामारी महामारी अनिवार्य रूपमा संसारको महामारी हो ...
क्यान्सर धेरै चोटि किन र मक्खी होइन?
एउटा बारुला किन धेरै चोटि टाँसिन सक्छ र माहुरीलाई? माहुरीको ब्रशको साथ टाँसिएको हुन्छ, त्यसैले जब यो बिट हुन्छ र आन्द्रा बाहिर निकाल्छ, मौरीको स्टिंग पछि (वा बरु डing्ग) पछि, डंक काटिएकोमा रहन्छ ...
तिल के हुन्छ? उनी सडकबाट देखिन्, उनी भित्र उड्न र कार्पेटमा अण्डाहरू छोड्न र उडान गर्न सक्छिन्। यो हुनबाट रोक्नको लागि पतंगहरू विरूद्ध सबै प्रकारका सुरक्षाहरू खरीद गर्नुहोस्। बलहरु उदाहरण को लागी ...
स्पाइडर .. मलाई बताईन जहरीला जहरीला छैन ???
माकुरो .. मलाई विषाक्त होइन विषाक्त बताउनुहुन्न ??? प्राकृतिक रूपमा विषाक्त। वोरोन्ज क्षेत्रमा अझै पाइन्छ। र सेराटोभ। हो, हामीसँग कुनै विषाक्त व्यक्ति छैन)) तिनीहरू ट्रपिक्समा बस्छन् =) फू !!!! म निश्चित रूपमा लिन्छु ...
एक्वैरियममा पानी बिग्रेको छ, वैसे पनि। के गर्न
एक्वैरियममा पानीको गन्ध आउँछ, परिवर्तन भयो, सबै त्यस्तै। के गर्ने स्टेग्नेन्ट जोन एक्वामा गठन हुन्छन्, सडनेको परिणामस्वरूप तिनीहरूमा हाइड्रोजन सल्फाइड गठन हुन्छ। यो परिणाम हो, र कारणहरू निम्नानुसार हुन सक्छन्: सही छैन ...
गर्भावस्था भिडीयो तोता कसरी निर्धारण गर्ने? ! :
कसरी बुजारीगर गर्भवती छ भन्न सकिन्छ? ! : तर कसरी बुझ्ने यदि अण्डाहरू खाली छन् र ती viviparous छन्? पोतेहरू गर्भवती हुँदैनन्, तिनीहरूले अण्डाहरू दिन्छन र प्रदान गर्छन्। प्रजनन प्रजननको बारेमा थोरै ...
77 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,506 प्रश्नहरू।